Izindaba - Intuthuko yokwelashwa kwamazinyo kusasa
Intuthuko yokwelashwa kwamazinyo kusasa
Amazinyo akhula ngenqubo eyinkimbinkimbi lapho izicubu ezithambile, ezinezicubu ezihlangene, izinzwa nemithambo yegazi, zihlanganiswa nezinhlobo ezintathu zezicubu ezinzima zibe yingxenye yomzimba esebenzayo. Njengesibonelo esichazayo sale nqubo, ososayensi bavame ukusebenzisa i-incisor yegundane, ekhula ngokuqhubekayo futhi ivuselelwe impilo yonke yesilwane.
Ngaphandle kokuthi i-incisor yegundane ivame ukufundwa ngokwesimo sokuthuthuka, imibuzo eminingi eyisisekelo mayelana namaseli ahlukahlukene amazinyo, ama-stem cells nokwahlukana kwawo namandla e-cellular asazophendulwa.
Besebenzisa indlela yokulandelana kweseli eyodwa ye-RNA nokulandela umkhondo kofuzo, abacwaningi baseKarolinska Institutet, i-Medical University yaseVienna e-Austria naseHarvard University e-USA manje sebekhombe futhi baveza zonke izibalo zamangqamuzana emazinyweni egundane nasemazinyweni abantu abasha akhulayo namadala .
"Ukusuka kuma-stem cells kuya kumaseli amadala ahlukaniswe ngokuphelele sikwazile ukuthola izindlela zokuhlukanisa zama-odontoblast, ezenza ukuthi kube namazinyo - izicubu eziqinile eziseduze nomgogodla - kanye nama-ameloblast, okukhipha koqweqwe lwawo," kusho okokugcina kocwaningo umbhali u-Igor Adameyko eMnyangweni WePhysology and Pharmacology, Karolinska Institutet, kanye nombhali osebenza naye uKaj Fried eMnyangweni Wezobuchwepheshe, eKarolinska Institutet. "Siphinde sathola izinhlobo ezintsha zamaseli nezendlalelo zamaseli emazinyweni ezingabamba iqhaza ekuzweleni kwamazinyo."
Okunye okutholakele kungachaza nezici ezithile eziyinkimbinkimbi zesimiso somzimba sokuzivikela emazinyweni, kanti ezinye zikhanyisa ukukhanya ngokwakhiwa koqweqwe lwawo lwamazinyo, izicubu ezinzima kakhulu emizimbeni yethu.
“Siyethemba futhi sikholelwa ukuthi umsebenzi wethu ungakha isisekelo sezindlela ezintsha zokwelashwa kwamazinyo kusasa. Ngokuqondile, kungasheshisa umkhakha owanda ngokushesha wamazinyo wokuzivuselela, ukwelashwa kwemvelo esikhundleni sezicubu ezilimele noma ezilahlekile. ”
Imiphumela yenziwe yafinyeleleka esidlangalaleni ngendlela yama-atlases asebenzisekayo asebenzisanayo asebenzisekayo asebenziseka kalula wegundane namazinyo abantu. Abaphenyi bakholelwa ukuthi kufanele baveze insiza ewusizo hhayi kuphela kososayensi bezinto zamazinyo kepha futhi nabaphenyi abanentshisekelo yokuthuthuka kanye ne-biology yokuvuselela ngokujwayelekile.
Izinto ezinikezwe yiKarolinska Institutet. Qaphela: Okuqukethwe kungahle kuhlelelwe isitayela nobude.